Inkabadan 100 Ruux oo Dhimasho iyo Dhaawac ku noqday Dab ka kacay Suuq ku yaala Ruushka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Inkabadan 100 Ruux oo Dhimasho iyo Dhaawac ku noqday Dab ka kacay Suuq ku yaala Ruushka.
On Mar 26, 2018 208 0
Dhisamaha Mall ganacsi oo ku yaala dalka Ruushka ayaa dab uu qabsaday, waxaana ka dhashey khasaare baaxad leh oo uu la murugooday madaxweynaha Ruushka Faladamir Butin.
Suuqa uu dabka ka kacay waxa uu ku yaalaa magaalada Kiimaroofo ee dalka Ruushka, waxaana dabkan oo ahaa mid ballaaran uu sababay burbur baaxad leh oo soo gaaray mallka, iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen inta ugu badan dadka ku sugnaa dhismaha mall-ka.
Afhayeen u hadlay wasaaradda Musiibooyinka ayaa shaaca ka qaaday in dabka ugu badan uu ka kacay dabaqa afaraad ee dhismaha, islamarkaana ay ku dhinteen 55 ruux, halka 69 kale ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan caruur farabadan.
Dabkan oo aan la ogeyn waxa sababay ayaa warbaahinta Ruushka waxay sheegayaan inuu bas beeliyay masaafo gaareysa 1.5Km oo labo jibaaran, waxaana ku basbeeley hanti aad u farabadan.
Aqalka Carmalin Afhayeen u hadlay wuxuu sheegay in Fadalamir Butin uu aad uga xunyahay dhibaatada dhacday, wuxuuna u tacsiyeeyey ehallada dadka ku geeriyooday dabkaas kacay.
Musiibadan rabaaniga ah ayaa kusoo aadeyso, iyadoo diyaaradaha dowladda Ruushka ay gumaad bahalnimo ah ka wadaan dalka Suuriya, dhowr beri ka horna duqeyn diyaaradaha Ruushka ku garaaceen suuq lagu iibiyo khudaarta oo ku yaala gobolka Idlib waxaa ku shahiiday 37 Ruux.